कोरोनाभाइरसबाट बच्न ब्रिटेनका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाका लागि प्लास्टिकको सहारा लिँदै SULSULE:A Truly Nepali News Portal
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लगातार बढ्न थालेपछि ब्रिटेनका अस्पतालहरू सघन उपचार कक्षका शैय्याहरू थप्न दिनरात काम गरिरहेका छन्।
तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै एक सघन उपचार कक्ष चिकित्सकले देशमा केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले सहयोग र सुरक्षासाधनको अभावमा भोग्नुपरेको नमीठो पक्ष देखाएका छन्।
बीबीसीसँग केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनीहरूको अस्पतालमा देखिएको उपकरण अभावका बारेमा बताएका छन् तर मिडियासँग कुरा नगर्न चेतावनी दिइएका कारण उनीहरू खुल्न सकेका छैनन्।
मिडल्यान्ड्सका एक चिकित्सकले भने यस विषयमा बोल्न चाहिन् र बीबीसीले उनको परिचय गोप्य राख्न उनको नाम परिवर्तन गरेको छ।
"कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको सबैभन्दा जोखिममा रहेका सघन उपचार कक्षका नर्सहरूलाई कुनै सुरक्षा प्रदान नगर्ने टोपी लगाएर काम गर्न भनिएको छ। यो गलत हो। त्यसकारण हामी प्लास्टिकका झोला वा एप्रनले आफ्नो टाउको छोप्न बाध्य छौँ।"
सरकारले वितरण प्रणालीमा कमजोरी भएको स्विकारेको छ र सशस्त्र बलको सहयोगमा राष्ट्रिय वितरण टोलीले स्वास्थ्य उपकरणहरू सबै अस्पतालमा पुर्‍याउन चौबिसै घण्टा काम गरिरहेको बताएको छ।
एनएचएस इङ्गल्यान्डले एप्रल १ मा १० लाखभन्दा बढी मास्क वितरण गरिएको बताएको छ तर त्यो भन्दा बढी आवश्यक पीपीईको बारेमा बोलेको छैन।
डा. रोबर्ट्सले अहिलेसम्म आफू काम गर्ने अस्पतालले सरकारबाट केही स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नपाएको बताइन् र त्यसले तनाव सिर्जना गरेको बताइन्।
"हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका मास्कहरू सबैमा नयाँ म्याद मिति टाँसिएको छ। हिजो एउटामा तीनवटा स्टिकर थियो। पहिलोमा म्यादमा मिति सन् २००९ थियो भने दोस्रोमा सन् २०१४ र सबैभन्दा माथिको सन् २०२१ थियो।"
इङ्गल्यान्डको जनस्वास्थ्य कार्यालयले भने नयाँ म्याद मिति टाँसिएका पीपीईहरू पनि राम्ररी परीक्षण गरी एनएचएसका कर्मचारीले प्रयोग गर्न हुने पाइएपछि दिइएको बताएको छ। तर डा. रोबर्ट्स यसमा पूर्ण विश्वस्त छैनन्।
अहिले उनको निगरानीमा भेन्टिलेटरमा उनका तीन सहकर्मी छन् जो सबैलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ।
तीमध्ये एक सघन उपचार कक्षका चिकित्सक हुन् जो डा. रोबर्ट्स जस्ते पूर्ण सूरक्षाबिना कोभिड वार्डमा खटिएका थिए।
अन्य दुई चाहिँ कोभिड वार्डमा नखटिएका कारण पीपीई नलगाउनेहरू थिए। तर ती दुवैले अस्पतालमा नै सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने डा. रोबर्ट्स बताउँछिन्।
अस्पतालमा बिरामीका नातेदारहरूलाई आउन दिइएको छैन।
"अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको फोनमा परिवारलाई 'तपाईँको बिरामी अब धेरै बाँच्दैनन् तर तपाईँलाई उहाँलाई भेट्न दिन सक्दैनौँ ' भन्नु हो," डा. रोबर्ट्स भन्छिन्।
"सामान्यतया बिरामी कुरुवाहरूलाई हामी सकेजति गर्छौँ भन्ने गर्थ्यौँ तर म अहिले त्यो भन्न सक्दिन किनभने अहिलेको अवस्थामा म सक्नेजति गर्न सक्दिन।"
एनएचएस इङ्गल्यान्डले अहिलेसम्म कति स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको बतायो।
स्पेनमा मार्च २७ मा ९,४०० जना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको र इटलीमा मार्च ३० सम्म ६,४१४ जना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क थियो।
ब्रिटेनमा केही स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोरोनाभाइरसको कारण मृत्यु भइसकेको छ।